Uyifaka njani iMinikelo kuTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifaka njani iminikelo kwiTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 390
Inani labantu abaqale ukusebenzisa iqonga leTwitch liyamangalisa ngokwenene, kuba iwebhusayithi ezinikezelwe ukuvumela ukuhanjiswa kwevidiyo phakathi kwabasebenzisi, ngakumbi phakathi kwabo benza umxholo malunga nemidlalo yevidiyo. Le nethiwekhi ivumela abantu ukuba bahlale benxibelelana kwaye bazi ngeziganeko abazinikiweyo kumajelo.
Uninzi lwabantu abavelisa umxholo kule webhusayithi, banokufumana inzuzo ngayo, oku nge "bits", Olu luhlobo lwemali ebonakalayo, ethi xa ifunyenwe, ivumele ukuba kutshintshiselwane ngemali yokwenyani. KwiTwitch kuvunyelwe ukwenza ingeniso, ngenxa yoku kufuneka wenze uluntu, kwaye wenze into ebizwa ngokuba "yiminikelo". Ngale nto, ungaqala ukwenza inzuzo ngexesha elityaliweyo.
Ungayiseta njani iminikelo kwiTwitch?
Xa abantu bejoyina iqonga leTwitch, banakho yiba "yimisinga", nangona ukufumana isihloko kungathatha umsebenzi omkhulu kunye nomzamo.
Kodwa ngokulula kwe-intanethi, inokwenziwa ngaphandle kwexesha. Nangona kunjalo, ukuba ujoyine iqonga sele kucacile ukuba into oyifunayo kukwenza umxholo, kwaye ke wenze ingeniso ekhawulezayo kwaye ke wenze imali ngayo yonke into eyenziweyo. Ngokukhawuleza, Kuya kufuneka ufake useto olusebenzayo ukwenza iminikelo evela kwabanye abasebenzisi.
Ukulungiselela le nto, kufuneka usebenzise inkonzo yomntu wesithathu, ukuze ababukeli abonwabileyo umxholo, benze igalelo labo kwaye le mali ifikelele kwiakhawunti yebhanki yomntu. Ukwenza kusebenze kwaye uqwalasele le "minikelo kwiTwitch", kuya kufuneka uhambe ngenkqubo ngaphandle kwengxaki. ukuba ishiywe kamva.
Inkqubo yokwenza kusebenze iminikelo kwiTwitch
Kwimeko yokuqala into ekufuneka yenziwe yile "Qhagamshela iakhawunti", ngokwenza oku ungasebenzisa izixhobo ezahlukeneyo, phakathi kwezona zisetyenziswa kakhulu yi "StreamLabs”. Isixhobo esihle sokwenza usasazo ubuqu, ngakumbi xa iyimidlalo.
Ukuba eqongeni, kufuneka ucofe "kuseto lomnikelo", Olunye ukhetho kufuneka luvele ngegama; "Qhagamshela kwi-akhawunti yeTwitch." Into ekufuneka yenziwe kukubonelela lonke ulwazi oluceliweyo kwaye emva koko ubonelele ngeakhawunti yePayPal yekhonkco lomnikelo ukuze usebenze. Ngale nto, yonke into iya kudityaniswa kwaye ababukeli baya kuba nakho ukwenza iminikelo ngalo lonke ixesha bafuna ngalo.
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele kwiTwitch
Ngokwenxalenye yayo, kunyanzelekile ukuba kwenziwe uhlengahlengiso oluthile ngokuthe ngqo kuseto lwewebhusayithi, ukuze abantu abonwabileyo umxholo banokwenza iminikelo, kubalulekile ukubabonelela ngekhonkco, eliya kubasa kwindawo apho baya kuthi beka imali, ukuyifumana kufuneka uye kule URL ilandelayo; i-streamlabs.com/YourTwitchUserName.
Idilesi ebonakalayo apho kufuneka ikhutshelwe kwaye incanyathiselwe ngqo kwisitishi seTwitch ukuze ufumane imali. Oku kwenziwa ngokufaka "iiphaneli zokuhlela", apho kuya kufuneka wongeze idilesi yekhonkco ekhutshelwe kwiphepha kwaye yile nto. Xa ababukeli befuna ukwenza iminikelo yabo, kuya kufuneka benze njalo ngale ndlela.
1 Ungayiseta njani iminikelo kwiTwitch?
1.1 Inkqubo yokwenza kusebenze iminikelo kwiTwitch
2 Yintoni ekufuneka uyiqwalasele kwiTwitch
Ungayibeka njani i-nightbot kwiTwitch?